မွန်းပိုအမ်ကို ကူညီပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မွန်းပိုအမ်ကို ကူညီပါ
Posted by moonpoem on Feb 14, 2013 in Business & Economics, Creative Writing, Jobs & Careers, My Dear Diary | 33 comments
ဒီနေ့ ရုံးကို ကျွန်မနေရာတွင် အစားဝင်ရန်မိန်းကလေး ၃ယောက်ကို အင်တာဗျူးသည်။အင်တာဗျူး
သည့် ၃ယောက်ထဲမှ ၂ယောက်ကို ခန့် မည် ဖြစ်သည်။ ထို ၂ယောက်တောင်းဆိုသည့် လစာက
နည်းလေသလား သို့ မဟုတ် ကျွန်မ မန်နေဂျာက သတ်မှတ်လိုက်လေသည်လားတော့ မသိ။
သူတို့ ၂ယောက်လုံးကို ခန့်လျှင်ပင် ၂ယောက်ပေါင်းလစာက ကျွန်မအခု ရသည့်လစာကို ပင်
မပြည့်ဟု မန်နေဂျာက ပြောသည်။
ကျွန်မသူ့ ဆိုလိုရင်းများကို နားလည်ပါသည်။ သူလျှော့ချသည့်လစာကို ကျွန်မ လက်မခံခဲ့ရ်ျ
ထွက်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော်ငြား သူ့ အတွက် လူမရှားကြောင်း သူပေးသည့်လစာသည် အဆင်ပြေကြောင်း
သက်သေပြဟန်ရှိဧ။်။ မထွက်ဘဲ တဖန်ပြန်လည် စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပြောလာဧ။် ။ ကျွန်မကို နားချသောသူများရှိဧ။် ။
ဒီရွာထဲက မိတ်ဆွေများ အကြံပေးကြသလို လစာတစ်ခုတည်း မကြည့်ဘဲ ရှေ့ ဆက်လုပ်သင့်ကြောင်း စသဖြင့်ပေါ့။
ကျွန်မ အနည်းငယ်တွေဝေလာသဖြင့် သူ့ ကို ထွက်မည် မထွက်မည် အဖြေမပေးဘဲ အကြိမ်ကြိမ်
စဉ်းစားသည်။ တစ်ရက်ကတော့ ရုံးက အင်ဂျင်နီယာ အစ်ကိုတစ်ယောက်ကိုပါပြောလာသည်။
သူလစာလျှော့သော်လည်း ကုမဏီသိပ်ကောင်းလွန်းသဖြင့် မွန်းပိုအမ် တစ်ယောက် မထွက်ချင်
ဖြစ်နေကြောင်း နောင်အချိန် ကုမဏီ ပရောဂျက်နည်းပါးချိန်များတွင်လည်း လစာကို လျှော့ဖို့ ရှိကြောင်း ပြောလာသည်ဟုဆိုသည်။
မန်နေဂျာကို ကွန်ဖန်းမေးကြည့်တော့လည်း ဟုတ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက် မှားသည်ဟု အများက သတ်မှတ်ကြမည်လား မသိပါ။ ထိုနေ့ က ကျွန်မ
ထွက်စာကို မပြင်တော့ကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုက်ပါသည်။ ကျွန်မကို အကြောင်းပြုပြီး တစ်ယောက်မှ စ တစ်ရာထိအောင်လူပါးဝပြီး
ခေါင်းပုံဖြတ်နေသော ကုမဏီတွင် ဆက်လုပ်ဖို့ ကျွန်မ ၀န်လေးသည်။ဘာပဲပြောပြော ဒီဖေဖော်ဝါရီ ကုန်တွင် ကျွန်မ ဒီကုမဏီတွင် ရှိနေမည် မဟုတ်တော့ပါ။
အခု ကျွန်မ မတ်လမှစပြီး အလုပ်လုပ်ရန် စဉ်းစားသောအခါ ၂မျိုးသွားတွေ့ ပါသည်။တစ်ခုက ကျွန်မ၀ါသနာပါသော တိုးဂိုက်အလုပ်ဖြစ်သည်။
ကုမဏီတစ်ခုတည်းဖြင့် ပုံသေမလိုက်တော့ဘဲ ဖရီးလန့်စ်
ဂိုက်လုပ်ဖို့ ။ ဂိုက်ဘ၀သည် လွတ်လပ်သည် ပင်ပန်းသည် သို့ သော်ဝါသနာပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေမရှိ
ပျော်ချင်လို့ ခရီးထွက်လာသော ဧည့်သည်များကို ကိုယ်က လိုက်လံ ဂရုစိုက် ရှင်းလင်းပြသရုံသာ။
သို့ သော် ဘ၀သည် အနှစ် ၂၀နေလည်း တိုးဂိုက်ပဲ ဖြစ်သည့်အတွက် စီနီယာကျသည် ဆိုတာကလွဲပြီး
ဘာရာထူးမှ ရှိမည် မဟုတ်။ ကျွန်မကျေနပ်နေမည်ဟု ထင်သည်။
နောက်တစ်ခုက ဂျပန် အခြေစိုက် ကုမဏီတွေ အများကြီး လာနေသဖြင့် ဂျပန်စကားပြောတတ်သော၊
ရုံးလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိသော ၀န်ထမ်းများကို ခေါ်နေသည်။ လစာကတော့ ကျွန်မအခု ထွက်ခဲ့သော
ကုမဏီလစားနီးပါးရှိသည်။ ကံကောင်းလျှင်တော့ ကုမဏီကောင်းနှင့် တွေ့ မည်။ ထိုကုမဏီတွင်
အနှစ်၂၀နီးပါးလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် အခွင့်အရေးကောင်းနိုင်သည် လစာကောင်းလာနိုင်သည်။ရာထူးရှိမည်။
သို့ သော် ၀န်ထမ်းဘ၀ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အလုပ်များမှုတွေ ရှိနေမည်ကတော့
အမှန်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေနိုင်မည်ဟု ထင်သော်လည်း ဂျပန်ကုမဏီတစ်ခုကို ပြန်လည် ၀င်ရောက်ဖို့ ရာ
ကျွန်မ အားယူရပေဦးမည်။ဘ၀တွင် စိတ်ချမ်းသာမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုသည် အရေးကြီးသလား၊ သူ့ အသက်အရွယ်နှင့်သူ
ထိုက်သင့်သော ရာထူးရာခံသည် အရေးကြီးသလား။
သေချာတာကတော့ သေရင် အကုန်ထားခဲ့ရမှာချည်းဖြစ်သော်လည်း ရှင်သန်နေချိန်တွင် ဖက်တွယ်ရန်
ကျွန်မ မည်သည့်လမ်းကို ရွေးချယ်ရပါမည်လဲ။
စဉ်းစားရကြပ်လာသဖြင့် ရွာထဲကို ၀င်ပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်ရသည်။ ကူညီကြပါဦး။ ၀ိုင်းဝန်းအကြံပေးကြပါဦး။
လွတ်လပ်တဲ့ တိုးဂိုက်လုပ်ရန် အကျန်ကြွေးပါသည်။
အကြံဥာဏ်ပေးသော ပီချိုကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကျန်တွေ မကျွေးပါနဲ့ ဗျာ။ အကြွေးကျန် နေမှာ စိုးလို့ ပါ။
ရုံးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် စဂါးပျံဘဝနဲ့ ကျေနပ်မနေနဲ့၊ တက်လမ်းအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဆက်သင်ပါ။ တိုးဂိုက်လုပ်မယ်ဆိုလည်း ဂျာပွန်စဂါးအပြင် အခြားဘာသာဒေဗတခု အပိုသင်ယူပါ။ (အင်္ဂလိပ်စာ ဖြစ်သင့်တယ်၊ အဲဒါ တတ်ပီးသားဆိုရင် မွှတ်နေအောင် ချာလပတ်အရမ်း ကျင့်ပါ) စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာတခုခု ရှိထားတဲ့အခါ တိုးဂိုက်စီနီယာဖြစ်သွားရင် ခရီးသွားကုမ္မဏီဂျီးတွေ နောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ မံနေကြာဖြစ်ကိန်းရှိသည်။ အကောင်းဆုံးဂဒေါ့ ဘဝကြောင်ဖော် ရှာပါ။ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ စာလုံးပေါင်း သေချာဖတ်တတ်ရင် သိမည်။ အမြန်ဆက်သွယ်ပါ… :harr:
တခုသတိထားမိတာလေးပါ.. အူးကြောင်ကြီးက ပိုအမ်လေးရဲ့
အရေးကိစ္စတွေမှာ အလေးအနက်လေး အကြံပြုနေတာ
ကြောင်ဘ၀ကနေ ဟင်္သာဖိုဘ၀ပြောင်းတော့လေမလားလို့.. ဟီးဟီး..
( ဂိုက်ဘ၀သည် လွတ်လပ်သည် ပင်ပန်းသည် သို့ သော်ဝါသနာပါသည်။ )
ဒါ အကောင်းဆုံးပါပဲ ၊ ကျနော်လည်း ဝါသနာပါရာကိုသာ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာလုပ်နေသူပါ ၊
လွတ်လပ်သော တိုးဂိုက်လုပ်လျှင် မိမိပေါ်မူတည်မည်၊ မိမိကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် ခံစားခွင့်ရှိနိုင်မည် ဒါပေသည့် တိုးရဖို့ Trip ကောင်းဖို့ စသည့် မားကတ်လည်း ကိုယ်ဘဲလုပ် တိုးဂိုက်လည်း ကိုယ်ဘဲမို့ အချိန်တစ်ခုထိတော့ ပင်ပန်းစွာဖြတ်သန်းရမည်။ ကောင်းသည့်ဘက်ကို ဦးတည်သလို အခက်အခဲတွေနဲ့ လည်းကြုံလျှင် ကြုံနိုင်သည်။
ဂျပန် အခြေစိုက်မှာလုပ်လျှင် ကုမ္မဏီက မားကတ်နဲ့ တိုးရှာဖွယ်ရှိသဖြင့် ကိုယ်က တိုးဂိုက်အလုပ်ကို လုပ်ရုံနဲ့ ပုံမှန်လစာဝင်ငွေ ရနေမည်၊ ကိုယ့်အတွက် အရှုံးနည်းနိုင်ပြီး ဘ၀အတက်လည်း ပုံမှန်သွားနေမည်ဖြစ်သည်။
အဲဒီတော့ ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ အပင်ပန်းခံလုပ်နိုင်မလဲ ပြီးတော့ အရှုံးခံနိုင်အား ( အလွတ်တိုးအတွက် မအောင်မြင်ခင် ကာလအတွင်း စရိတ် ) ဘယ်အထိရှိလဲ ပြန်ပြီး စဉ်းစားကာ ရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်လို့ ………………။
ဒီကိစ္စကို ရုပ်တည်နဲ့ ၀င်ဖြီးရမယ် ဆိုရင်ဖြင့်
ကိုယ်ပိုင် အတတ်ပညာနဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်
အဲ… နောက်ပီး နောက်ဆံတင်းစရာ ကိစ္စ၀ိစ္စတွေ သိပ်မများဘူးဆိုရင်
ဘာကိုမှ တွေဝေမနေနဲ့ သိပ်လဲ ဖက်တွယ်စရာမလိုဘူး
သို့ သော် ဘ၀သည် အနှစ် ၂၀နေလည်း တိုးဂိုက်ပဲ ဖြစ်သည့်အတွက်
အနှစ် ၂၀လုံး ဒီဘ၀ဘဲ ဖြစ်နေမှာလို့ ဘယ်သူပြောလဲ
လောလောဆယ် မနက်ဖြန်ထက် မပိုတာကိုဘဲ တွေးကြည့်ပါ
လမ်းလျှောက်နေသူအတွက် အခွင့်အလမ်း ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
သိပ်ပီး စိတ်ကျဉ်းကျပ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ ကြာကြာမနေသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်
လေနုအေးတွေ အများကြီး ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေလိမ့်မယ်
ကျုပ်ကတော့ အပူအပင် နောက်ဆံသိပ်မတင်းတော့
လွတ်လပ်တဲ့ ခြေသလုံး အိမ်တိုင်ဘ၀မှာဘဲ အဆင်ပြေသလောက်နဲ့ဘဲ ကျေနပ်တယ်
ရေငတ်လာပီ … တခွက်လောက် ပြေးကစ်လိုက်ဦးမယ်
တနေ့သေကြရမည် မသေခင် လုပ်ချင်တာလုပ်ကြ
ကိုယ်ဆိုရင်တော့ သူများကို အားကိုသရောင် ရုပ်တည်လေးနဲ့ လိုက်မေးပြီး.. ပြီးရင်တော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်တာပါပဲ
ကိုယ့်ဘွရဲ့ decision maker က ကိုယ်သာဖြစ်သင့်ပါတယ်…
ကိုယ် လုပ် ချင် တာ ကိုယ် လုပ် ။ ( But ကိုယ် ဖြစ် ကိုယ် ခံ)
နာ့ မြင်း နာ စိုင်း စစ်ကိုင်း ရောက်ရောက်။
နာ့ လှေ နာ ထိုး ပဲခူး ရောက်ရောက်။
မိမိ ကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ။
အဲဂလို စကားတွေ အားပြုထားတဲ့သူမို့ ဘယ်သူ့မှ မမေးပဲ ကိုယ့် သ ဘော ကိုယ် ဆောင် ပါ လို့ ပဲ အ ကြံ ပေး ပါ ရ စေ။
လကဗျာရေ …. ကိုယ့်စိတ်ထဲ ပိုအဆင်ပြေပြီး ကိုယ့်လုပ်ချင့်တဲ့ဟာကိုသာ
သေချာရွေးလိုက်ပါ … ကိုယ့်ရွေးချယ်မူက မှန်ကန်မှာပါ ….
မှန်တယ်ဗျို. ထွက်သာထွက်.. အဓိကက စိတ်ချမ်းသာမှုပဲ.. အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ၀ါသနာနဲ. စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့အလုပ်က ပိုအဆင်ပြေတယ်…
၀န်ထမ်းတွေကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ ကုမ္ပဏီဆို မလုပ်တာကောင်းပ…
ပြီးတော့ စကားကို ဟိုပို.ဒီပို.နဲ. ပိုတောင်ဆိုးသေး…….
ဆူး ရဲ့ အတွေးကို အကြံပြုကြည့်ချင်တယ်။
ပွင့်လင်းလာတဲ့ မြန်မာပြည် အတွက် ခရီးသွား ပေါများလာတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
တိုးဂိုက် လုပ်ရင်းနဲ့ အဆက်အသွယ် အသိအကျွမ်းပေါများလာတဲ့ အခါ တိုးကုပ္မဏီ သူဌေးမကြီးကော မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ မပြောနိင်ပါဘူး။
လူငယ်တွေ ဦးဆောင်ပြီး တိုးလုပ်ငန်း လုပ်နေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
ခရီးသွားများလာရင် ပင်လယ်ရေ ဘယ်သူ သောက်သောက် ကိုယ် ခပ်နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ခရီးသွား တွေ လာလိုက် သွားလိုက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက် လမ်းစတွေ ကိုယ်တိုင် မှတ်သားထားပြီး နောင်တချိန်မှာ သူများတွေ ထက် ပိုသာတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ လုပ်ငန်းကြီး လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
အချိန်သည် ရွေ့လျားနေသလို ကံကြမ္မာသည်လည်း တသမတ်တည်း မနေပါဘူး ဘ၀ အချိုးအကွေ့ တခုမှာ အခက်အခဲဆိုတာ ကောင်းတဲ့ ဘက် ကို သွားနိုင်သလို မကောင်းတဲ့ ဘက်ကို သွားနိုင်တာမို့..
တိုးဂိုက် ဘ၀ ကို ရွေးချယ်ဖို့ ယာယီ ပြောချင်ပေမဲ့ တိုးလုပ်ငန်းရှင် တယောက် ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစား အားထုတ်ပါ။ အဲ့လိုပဲ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် အဆက်အသွယ် အချက်အလက်ပြည့်ဝ နေတယ် ဆိုရင် ငွေကြေး အင်အား တတ်နိုင်တဲ့ သူတယောက်ယောက်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး % နဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကလည်း အတိုးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ ငွေချေးတာတွေ လုပ်ပြီးလည်း လုပ်ငန်း ထူထောင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ၁နှစ်ကနေ ၃နှစ်ကတော့ လှိုင်းကြားမှာ လူးလိမ့်နေပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါတော့ ခံနိုင်ရည် ရှိအောင် အမြဲတွေးထားရပါလိမ့်မယ်။
သရက်ပင် စိုက်စိုက်ခြင်း ဘယ်တော့မှ အသီး မသီးပါဘူး ဂရုတစိုက် ရေအမြဲ လောင်းပေးပြီး နှစ် အတန်ငယ် ကြာမှ သီးတယ် ဆိုတဲ့ ဥပမာလေးလိုပါပဲ။
မေးတဲ့ မေးခွန်းကို မဖြေပဲ ပြောချင်တာ ပြောသွားပါတယ်။
စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ငွေကို အသည်းအသန် လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငွေတွေရာထူးတွေကိုအသာထားပြီး ကိုယ်ဝါသနာပါရာ စိတ်ပျော်ရွှင်ရာအလုပ်သည်သာ အကောင်းဆုံးပါ ကိုယ်ကလည်းဝသနာပါ စိတ်ဝင်စားတော့ ကြိုးစားဖို့လည်းဝန်မလေးတာမို့ အလုပ်လုပ်ရင်းငွေရော စိတ်ချမ်းသာမှုပါရနိုင်တာကိုသဘောကျပါတယ်။
ရာထူးဂုဏ်ဆိုတာကြီးကိုတော့ မိေ၇ွှကြည်ထည့်ကိုမစဉ်းစားပါဘူးရယ်။ ( ကိုကယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပြောချင်ရာပြောသွားပါတယ် )
ဟင်္သာဖိုမရှိသော ဟင်္သာမသည် မတင့်တယ်နိုင်…
လင်မရှိသော မယားသည်လည်း အကြံမများနိုင်တဲ့…
လင်မရှိသော မယားသည်လည်း မတင့်တယ်ပါ..
ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်လို့ရတဲ့ ဘယ်အရာမဆို ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့မရသော အရာလောက် တန်ဖိုးမရှိ
လျှောက်လွှာလေးဖြည့်ပြီး လာလျှောက်လှည့်ပါ လို့
ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်လေ
ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာက လွယ်တယ်။
ချပြီးသွားရင်တော့ အဲဒီရွေးထားတဲ့လမ်းကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လိုက်ဖို့လိုတယ်။
freelance လုပ်လို့ ပင်ပန်းတာတော့ မှန်တယ်။
ဒါပေမယ့် အလုပ်ကို ကိုယ်က ရွေးချယ်နိုင်တယ်။
တကယ်ကြိုးစားရင်တော့ ဒီဘဝမှာတင် ရပ်နေမှာမဟုတ်ဘူး
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီထက်မြင့်တဲ့ နေရာကိုလဲ ရောက်သွားနိုင်တာပဲ
ကိုယ့် ကြိုးစားမှု အပေါ်ပဲ မူတည်တာပါ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည့်မှု ရှိရင် အခုကနေ စ လိုက်တော့
အချိန်နှင့် ဒီရေသည် လူကိုမစောင့် တဲ့နော်
လောလောဆယ် အနေအထားက ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ် ဝေဖန်နိုင် တဲ့အနေအထားမှာ ရှိမယ်.. ငွေကြေးအထောက်အပံ့လည်းရှိမယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝအတွက် ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ရှောက်စေချင်တယ်..။
သတ္တိမရှိ ဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင် မရှိ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတွေတော့ သူတပါးအရိပ်ခိုပြီးတက်လမ်းရှာကြတယ်..။
သူတပါးအရိပ်အောက်ကနေ အတွေ့အကြုံရပြီး အထောက်ပံ့ကောင်းတွေ ရလာရင် ဘယ်သူ့အောက်မှ ငုံ့နေ အောက်ကျို့နေစရာမလိုဘူး ။ဘယ်သူ့မျက်နှာမှလည်းထောက်စရာမလိုဘူး ။အလုပ်ကထွက် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ရဲရဲ ထူထောင်လိုက်ပါ..။
ဖတ်ကြည့်ရသလောက်က ကိုယ့်ဘာသာ ရပ်တည်နိုင်နေပြီဘဲ.. နောက်လှဲ့မကြည့်နဲ့တော့..။
နောက်မှ ..ဟိုလူကြီးမြှောက်ပေးတာ ငါ့အတွက် အားဆေးပါလားလို့ မြင်လာပါလိမ့်မယ် ။
အလုပ်ရွေးမယ်ဆိုရင် ရေရှည်မှာ တက်လမ်းရှိတဲ့အလုပ်ကို ရွေးသင့်သလို…
ရွေးပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလည်း စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။
မကြာခဏ အစက ပြန်စနေရင် အပေါ်မရောက်တတ်ဘူး။
မြန်မာပြည်ဝင်တိုးရစ်တွေ.. အိုဘားမားကောင်းမှုနဲ့.. ဒီနှစ်ထဲ.. ၂ဆလောက်ထပ်တက်မလားပဲ..
မှားတယ်မှန်တယ် မပြောလိုပေမဲ့ ဘ၀တခုအထိုင်ကျဖို့ဆိုတာသိပ်လွယ်တဲ့ကိစ္စတခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လစာလျှော့မယ်ဆိုတော့လျှော့တဲ့လစာက တခြားမှာလုပ်တဲ့လစာထက်နဲနိုင်မလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ လစာကောင်းရင်တော့ ခဏသီးခံလုပ်ပါဦး ။ ဒီကြားထဲတခြားမှာလဲအလုပ်ရှာ သေချာမှပဲထွက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့အမှားအမှန်ဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရှေ့ရေးကို ဆုံးဖြတ်မှာမို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုမချခင်မှာ သေသေချာချာစဉ်းစားတာပိုကောင်းပါတယ်။
အကြံပေးချင်လို့ ၀င်ဖတ်လိုက် ပြန်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာ ၅ ခါလောက်ရှိသွားပြီ …
ကိုယ်တိုင်လဲ ၀န်ထမ်းလုပ်နေပြီး အလုပ်ထွက်ချင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ် … ဒါပေမယ့် အတွေ့အကြုံများများရဖို့ဆိုတာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ ၀န်ထမ်းလုပ်ကြည့်မှ ပိုသိရမှာ … မွန်းပိုအမ်က အသက်ငယ်သေးလို့ ဒီအချိန်မှာ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ များများရအောင် အရင်စုဆောင်းသင့်တယ် … တကယ်လို့ ယခုထက်ပိုပြီး ပညာရစရာ ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာသလို ဆုံးဖြတ်တာလဲ ကောင်းပါတယ် …
ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် လကဗျာလေး ဆန္ဒက တိုးဂိုက်လုပ်ဖို့ ပိုအားသန်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ်မို့ ရွေးသာရွေးလိုက်ပါ။
ဆူးပြောသလိုပဲ တစ်သက်လုံး ဒီ တိုးဂိုက်ပဲလုပ်မယ်လို့ သဘောမထားပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမြဲ တိုးလီဒါ၊တိုးကုမ္ပဏီအုံနာ လို့ စိတ်သွင်းပြီး မြင့်မြင့် စဉ်းစားပါ။
ကြိုးစားသူရဲ့ ရှေ့မှာ ရွှေခင်းထားတဲ့ လမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကို ငန်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကွယ်
ကဗျာလေးအနေနဲ့၊ အလုပ်ကတော့ လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲပေါ့ကွယ်
ဆိုတော့က ဘယ်အလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုတာ မရွေးခြယ်ရသေးခင်
ကိုယ်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းခွင်တွေဆီမှာ လုပ်နေတဲ့သူတွေကို ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် သွားလေ့လာစေချင်တယ်ကွယ်
ဒါမှ ကိုယ်လုပ်တဲ့အချိန် ကိုယ့်ဖို့အဆင်ပြေမလား ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်တာပေါ့ကွယ်
အကြံပေးထားကြတာ များနေပြီမို့ တစ်ခုပဲ ထောက်ပြချင်ပါတယ်
(အပေါ်မှာ ဆူး မန့်ထားသလိုပဲ)
တိုးဂိုက်လုပ်ရင် အနှစ် ၂၀ ကြာလဲ တိုးဂိုက်ပဲ ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး…။
အောင်မြင်ကျွမ်းကျင်တဲ့တိုးဂိုက်တယောက်ဟာ တိုးရစ်ဇင်လုပ်ငန်းကိုလဲ တဖက်က ထိုးထိုးဖေါက်ဖေါက်လေ့လာမယ်ဆိုရင် –
ပညာရှိတဲ့လူဟာ ငွေရှိတဲ့လူနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားပြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းဖို့တော့လိုပါမယ်။
ဦးလေးရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆို တိုးကုမ္ပဏီလုပ်ချင်လို့ ပါတနာရှာနေတာ ကြာလှပြီ..
ရာထူးရာခံတွေရဖို့ ထက် ကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုပဲ လုပ်ပါ့မယ်။ ရုံးလုပ်ငန်းသည် လည်း အတွေ့ အကြုံတစ်ခု ဖြစ်သလို
တိုးသွားတာသည်လည်း အတွေ့ အကြုံများဖို့ လိုတဲ့အတွက် ရပြီးသား အတွေ့ အကြုံတွေကို တောက်ပြောင်အောင် ပေါလစ်ထပ်တင်ပြီး ကြိုးစားပါ့မယ်။ မန်နေဂျာ ဖြစ်ဖို့ စီနီယာကျဖို့ ဆိုတာထက် သူဌေးဖြစ်ဖို့ ကုမဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မြင့်မြင့်မားမားထားပြီး ကြိုးစားပါ့မယ်။ စိတ်ရှူပ်ပြီး အားငယ်နေချိန် အားဆေးအများကြီး သောက်လိုက်ရသလို ကွန်မန့် တွေ အများကြီး ဖတ်ပြီး ကျွန်မမှာဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါကိုဘယ်လိုကုသိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့အတွက် အခု ပျောက်ကင်းသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ စေတနာရှေ့ တန်းတင်ပြီး အကြံပေးကြသော အားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်ရာ ကိုယ်သောက်ကြ ဘိုးဘိုးကတော့ တီးမာစတာ ပဲ။ ဟီး နာလဲ ဝင်ပြောကြည့်တာ၊
အသက်ငယ်သေးရင် နေရာများများမှာ လုပ်ဖူးတာ အတွေ့အကြုံနဲ့ ရင့်ကျက်မှု ပိုရမှာတော့ သေချာတယ်၊ တိုးဂိုက်က အားမထည့်ရင် နှစ် နှစ်ဆယ်လည်း တိုးဂိုက်ဆိုတာ ဟုတ်မယ်၊ ရရ စားစားနဲ့ အသက်ကြီးသွားမှာ၊
ကိုယ့် အတွက် လစာကောင်း ပေမဲ့ ကိုယ့် အောက် လူ တွေ လစာ မတရား နည်း နေလို့ စိတ်မသက်သာ ဖြစ်ရတာ တော့ တူ သွား ပြီ။ ဒါကြောင့် အဲ့ ဒီအလုပ် ကနေ ထွက်တော့ မလို့။
ငွေဆယ်သိန်း လောက်နဲ့ ဘာ အလုပ်လုပ်ရင် တစ်လ ဘယ်လောက် ၀င်ငွေ ရ နိုင်မလဲ။ အကျန်ကျွေး ပါဦး ဂေဇက် ၀င် ရပ်ဆွေရပ်မျိုး တို့ ခင်ဗျား…..။
ငယ်စဉ်အချိန်က လူရောစိတ်ပါ အပင်ပန်းခံ၍ရုန်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါ၏။
အဓိကအချက်ကတော့ မိမိအား တန်ဖိုးထားသောနေရာတွင်သာအလုပ်လုပ်ဘို့ စဉ်းစားစေချင်ပါ၏။
တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန် မှာ အရီးတို့ တွေ လမ်းဆုံမှာ တွေ့ရတယ်။
ကိုယ်ဘယ်သွားမယ် ဆိုတာ သိရင်တော့ လမ်းမပျောက်ဘဲ သိတဲ့လမ်း ကို ဆက်သွားနိုင်တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လမ်းမသိတော့ချိန်မှာတော့ တွေ နေလေ့ရှိတယ်။
အီနီမီနီမိုင်နီမို ဆိုပြီး ကလေးတွေ ကျရာရွေးသလို ဇွတ်မှိတ်ပြီး သွားဖို့ ရွေးလိုက်ရတာလဲ ရှိတယ်။
မရွေ့ရဲဘဲ ဒီအတိုင်းရပ် ငိုင်နေရတာလဲ ရှိတယ်။
သွားနေတာက ရပ်နေတာထက် ပိုပြီး ကောင်းတာလဲ ရှိတယ်။
သွားရင်း ပိုပြီး လမ်းပျောက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရပ်နေပြီး စိတ်ညစ် အလုပ်မဖြစ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီတော့ ရမ်းသမ်းပြီးဘဲ ဆက်သွားသွား တာက ဒီအတိုင်းဘဲ ရပ်နေတာထက် အခွင့်အလမ်း ဖြစ်လာနိုင်သလို ဆိုးသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီတော့ ဘာတွေဟာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်လာမယ် လို့ ကြိုတွေးလိုက်ပါ။
အဲဒါတွေ ကို ခံနိုင်ရည် ရှိသလား တွက်ပါ။
ဖြစ်လာသမျှ ရင်ဆိုင်နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဖြစ်သင့်တဲ့ လမ်း (ဒါမှမဟုတ်လဲ) ကိုယ်သဘောကျတဲ့လမ်း ကြိုက်တာရွေးပေါ့။
လူတစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ဘဝ မှာ Value ထားတာခြင်း မတူ တော့ သမီး ဘာကို ရွေးပါလို့ အရီး မပြောနိုင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ထားတဲ့ Value အတိုင်း ဖြစ်အောင် သာကြိုးစား ရွေးပါလို့ ပြောချင်တယ်။
အပေါ်မှာ ကကြောင်ပြောသလိုဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုပြည့်အောင်တော့ ပညာတွေ နဲ့တော့ မပြတ် နေသင့်တယ်။
ဒါထက် လမ်းဆုံ မှာရောက်နေတာ သမီးတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး လို့ ဘဲ အားပေးချင်ပါတယ်။
တိုးဂိုက်ကို ၀ါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်… တကယ်လည်းလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ တကယ်တော်တဲ့ ဂိုက်တွေ ရှိစေချင်ပါတယ်…
သူများဝန်ထမ်းလုပ်ရတာချင်းအတူတူ ၀ါသနာပါရာကိုလုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်.. အစ်မပြောသလိုပေါ့.. ဂိုက်ဆိုတာကို professional အနေနဲ့ရွေးထားရင်တော့ တစ်ချိန်မှာ အပြင်လူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့လေ… ဒါပေမယ့် သုံးတတ်စုတတ်ရင် ဂိုက်ဆိုတာက အချိန်တိုအတွင်းမှာ ၀င်ငွေများများရနိုင်တဲ့အတွက် နောင်တစ်ချိန် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ… ဒါပေမယ့် explanation ဆိုတာထက် တိုးတစ်ခုကို ကောင်းကောင်း manage လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် တကယ့် excellent guide တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ဖက်.. ဂိုက်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ လုပ်လို့ ရမှာပါ…
(မွန်မွန်ကတော့ ခရီးဒဏ်မခံနိုင်လို့.. )
ဂိုက်အပြင် ဂျပန် ဘာသာ စကားပြောသင်တန်းဖွင့် ပါလား ခုခေတ် ကသင်တန်းခေတ်စားတယ်လေ
အေးဆေးပဲ အသက်ကြီးတဲ့ထိ ……….ok